केपी ओली र सरकारका सन्दर्भमा झलनाथ खनालसँगको वार्ता| Nepal Pati
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अहिले विवाद छ । शीर्षतहका नेतादेखि दोस्रोतहका नेताहरु पनि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । माधवकुमार नेपालले संसदमा सरकार विरुद्ध र चियापान गरेर पार्टी नेतृत्व विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि वाहिर आएको विवादले पार्टीभित्र आगो सल्किएको छ । अब विवाद समाधान कसरी हुन्छ ? नेतृत्वसँग केही असन्तुष्ट तर बिच धारमा रहेका झलनाथ खनालसँगको छोटो कुराकानी
पार्टी एकीकरण नसकिदै विवाद सुरु भयो । अहिले देखिएको विवाद कस्तो विवाद हो ?
विवाद त नभनौ पार्टीभित्र केही असन्तुष्टिहरु देखिएका छन् । ती असन्तुष्टिहरुका सन्दर्भहरु के हुन ? किन बाहिर आए ? कसले के भने ? भन्नुभन्दा पनि ती विवाद समाधान गर्न अब के गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । अब स्थायी समितिको बैठक बोलाएर तत्काल समाधान खोजिनुपर्छ ।
माधव कुमार नेपालले देश डुब्नै लाग्यो भन्नुभयो त्यो सरकारका सन्दर्भमा भनेको हो की पार्टीका सन्दर्भमा भनेको ?
त्यो त उहाँले नै जान्ने कुरा हो । यसमा म केही भन्न चाहान्न । तर सरकारको कामको प्रभावकारिताका विषयमा पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि देखिन्छ । चार–चार महिना भयो पार्टीको तल्लो तहसम्म एकीकरण भइसकेको छैन । यो राम्रो होइन । चार–चार महिनासम्म पार्टी एकीकरण नहुँदा देश पार्टीले चलाएको छ की अरु कसैले चलाएको छ ? भन्ने कुरा उठ्नु स्वभाविक हो । यसलाई हामीले गम्भिर ढंगले लिनुपर्छ ।
सरकारले भने जस्तो काम चै गर्न सकेन भन्ने यहाँहरुको निस्कर्ष हो ?
सरकार गठन भएको सात महिनामा जे गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न नसकेको नै हो । मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा तीन महिनामा आएको लहर अहिले किन आउन सकेन ? त्यो प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ । तर परराष्ट्र मामिलाका विषयमा, छिमेकीसँगको सम्बन्धका विषयमा भने सरकारले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ त्यसको पनि मुल्याङ्कन हुनुपर्छ ।
माधव नेपालले देश डुब्न लाग्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीले देश डुब्दैन म नहुँदा किन यत्रोकुण्ठा भनेर ? अमेरिकाबाट उल्टो प्रश्न गर्नुभयो नी ?
यसमा मेरो केही टिप्पणी छैन । प्रधानमन्त्री आएपछि तत्काल स्थायी समितिको बैठक बसेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । अहिले जुन हिसावले पार्टी सरकार अगाडी बढीरहेको त्यही अवस्था कायम रह्यो भने चै डुब्न पनि सक्छ ।
यो विवाद पूर्व एमालेभित्रको मात्रै विवाद होकी नेकपाभित्रको विवाद हो ?
पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि छन् । ती असन्तुष्टि सिंगो नेकपाभित्रका असन्तुष्टि हुन । अहिले म यति मात्रै भन्न चाहान्छु । फेरि पनि मेरो जोड छ । तत्काल स्थायी समितिको बैठक बसेर समाधान खोजिनुपर्छ ।